कसले कहाँबाट गरे मतदान ? « Dainik Online
कसले कहाँबाट गरे मतदान ?
प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७९, शुक्रबार ८ : ३६
-विवेकशील साझा पार्टीको काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार समीक्षा बास्कोटाले मतदान गरेकी छिन् । काठमाडौं मध्य बानेश्वरस्थित भ्याली भ्यु स्कुल केन्द्रबाट मतदान गरेकी हुन् ।
-मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मध्यबानेश्वरस्थित सानो गौचरन हाइट मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् ।
-नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मतदान गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले रौतहटको गौर नगरपालिका–१ को मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।
-युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेशराज गहतराजले मतदान गरेका छन् । । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मन्त्री गहतराजले बाँकेको कोहलपुर–९ पिपेरी मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।
-राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापाले हेटौंडा उपमहानगरपालिका ६ स्थित बंशगोपाल उच्च माविमा रहेको मतदान केन्द्र्रबाट मतदान गरेका छन् ।
-गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मतदान गरेका छन् । उनले नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका(१ स्थित शमशेर मावि, जौजुवा केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।
-नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–२ स्थित सत्यवती मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् ।
-नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, ओमसरी घर्तीमगर र पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मतदान गरेका छन् ।
-पोखरामा गठबन्धनका मेयर उम्मेद्‌वार धनराज आचार्यले मतदान गरेका छन् । मतदानको सुरुमै उनले वडा नम्बर ३३ को शान्तिउदय मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् । मतदान स्थलमा ७ बजे अगावै पुगेका उनले सो केन्द्रको मतदान केन्द्र ‘ख’ बाट मत खसालेका हुन् । उनी एकीकृत समाजवादीबाट गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बनेका हुन् ।
-कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह र काठमाडौं महानगरपालिका मेयरका उम्मेदवार सिर्जना सिंहले मतदान गरेका छन् । उनीहरुले महानगर–१६ स्थित युवक माविबाट मतदान गरेका हुन् । सिर्जना प्रकाशमानकी पत्नी पनि हुन् । उनी सत्ता गठबन्धनबाट महानगर मेयरमा उम्मेदवार बनेकी छन् ।
-माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले मतदान गरेका छन् । पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका पोखरेलले बर्दिबासस्थित रजाबास केन्द्रमा मतदान गरेका हुन् ।
-नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले गृह जिल्ला पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–१, नवमीडाँडास्थित शान्ति क्षेत्र आधारभूत विद्यालयमा मतदान गरेका छन् । बिहान ७ बजे पुगेर उनले मतदान गरेका हुन् ।
-अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले मतदान गरेका छन् । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका– ५ को यमुना नन्द नमुना माध्यमिक विद्यालयको ‘क’ मतदान केन्द्रबाट उनले मतदान गरेका छन् । मन्त्री शर्माले बिहान ७ बजे नै मतदान गरेको मतदान अधिकृत बिनाराम खड्काले जानकारी दिए ।
-राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मतदान गरेका छन् । गृह जिल्ला पर्वतको मोदी गाउँपालिका-७ राम्जाको पशुपति मावि क केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् । उनले पशुपति केन्द्रबाट बिहान मतदान गरे ।
-चितवन भरतपुर मेयरका उम्मेदवार विजय सुवेदीले मतदान गरेका छन् । एमालेका तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेददवारी दिएका उनले भरतपुर– १२ स्थित मोहन माविबाट मतदान गरेका हुन्।
-पोखरा महानगरपालिका मेयरका लागि अटेरी समूहका स्वतन्त्र उम्मेदवार गनेश पौडेलेले मतदान गरेका छन् । लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार भएपछि साहित्यकारसमेत रहेका पौडेलको सर्वत्र चर्चा हुँदै आएको थियो ।
-नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका-५ को मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन् ।
-एमाले सचिव योगेश भट्टराईले मतदान गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ताप्लेजुङ् मैवाखोला गाउँपालिका-३ मा रहेको नारायणी मावि साँघुको मतदान केन्द्रमा उनले मतदान गरेका हुन् ।